calamada April 26, 2017 1 min read
Wararka ka imaanaya gobalka Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya waxey sheegayaan in qeybo ka mid ah gobalkaasi uu ka dhacay dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Shabaabul Mujaahidiin iyo kuwa Kufaarta Xabashida Itoobiya.
Ciidamada Xarakada Alshabaab ayaa weerar qorsheysan ku qaaday kolanyo ka tirsan ciidamada Kufaarta Xabashida Itoobiya oo ku sugnaay Tuulada Bur-daar oo ah tuulo dhacda wadada isku xirta magaalada Beledweyne iyo deegaanka Halgan.
Dagaalkan waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan’iyadoona dhawaaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlayay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobalka Hiiraan.
Dagaalka oo socday muddo ka badan Saacad ayeey Xabashidu markii dagaalka uu soo gabagaboobay madaafiic ku garaaceen deegaanada howdka ee dhaca wadada isku xirta Beledweyne iyo Halgan taasi oo muujineysa in Xabashida khasaara culus lagu gaarsiiyay dagaalkaasi.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Faafreebka Wararka 29-07-1438Hijri.
Next: Saddex Lugood Oo Lagu Dilay Magaalada Muqdisho.